China 6 mu1 USB3.0+ mini DP kusvika HDMI+ USB3.0 + SD/ TF Docking chiteshi cheSurface Pro 4 vagadziri nevatengesi |Wellink
6 mu1 USB3.0+ mini DP kusvika HDMI+ USB3.0 + SD/ TF Docking chiteshi cheSurface Pro 4
3*USB3.0 A/ F (5Gbps)
USB3.0+ mini DP Murume
Chinja Mafaira muSekondi
Chinja mabhaisikopo, mapikicha, uye mimhanzi nekumhanya kusvika pa5 Gbps kuburikidza ne USB-C data port uye mbiri USB-A ports.
Surface Pro 6th/ 5th/ 4th Docking Station: Iine 3 USB 3.0 ports+1 mini DP port+1 4K HDMI port+1 SD (SDHC / SDXC) &1 Micro SD(TF) kadhi yekuverenga kadhi.Wedzera Surface Pro6/ 5/4 yako neU-disk, mbeva, keyboard, TF/SDHC kadhi, 4k monitor & HDTV, purojekiti yese mune imwe Microsoft Surface hub adapta ine HDMI.
Surface Pro Hub Mini DP kusvika 4K HDMI Adapter: Batanidza tsananguro yakakwirira kubva palaptop yako yepamusoro Pro kuti itarise, purojekita, kana LCD inopa girazi skrini kwauri, HDMI resolution inosvika 4K/2K@30Hz inobuda.
Dual High Speed ​​USB 3.0: High speed kutapurirana data kusvika ku5Gbps, ingangoita kagumi nekukurumidza kupfuura USB 2.0 (480 Mbps) kadhi kuverenga, kumashure kunoenderana ne2.0/1.1.
Durable & Chiedza Huremu & Inotakurika: Dhizaini neAluminium alloy kesi, chengetedza mukati mechikamu zvakanaka.UIltra slim compact size uye huremu huremu hwaunogona kuitora nyore muhomwe, laptop kesi.
Kudzivirirwa Kudzivirirwa & Kwakasimba Kuenderana: Over-voltage dziviriro inochengetedza kuchengetedzwa kwemidziyo yako.Inoenderana neSDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, TF, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Mini SD, UHS- I makadhi anosvika 128GB.System Windows 2000 / ME/ XP / Vista / 7/8/ 10/ MAC OS 10.X system.
Mubvunzo:izvi zvichashanda nepamusoro pro 3?
Mhinduro:Ndine hurombo.Surface pro3 yakasiyana nepamusoro pro4 pro5 pro6, haisi kushanda nepamusoro pro3.
Mubvunzo:Ichashanda neSurface Pro6?
Mhinduro:Inokodzera Pro4 Pro5 uye Pro6, saka ndingati hongu.
Mubvunzo: unogona kubhadharisa Surface yako panguva imwechete iyo doc yakavharirwa mukati?
Mhinduro:Ehe!Simba rekubatanidza riri pasi pezvibatanidza izvi.
Mubvunzo:Inotaridza kunge ichakwana yepamusoro pro 3, asi zvakadaro inotaura kune 4/5/6 chete.Ndokumbira usimbise kuti chii chakasiyana kuti haikwane 3?Imwe sku?
Mhinduro:Nharaunda pakati pe USB uye mini DP port yakasiyana nePro3, 4 / 5 / 6. Muchitoro chedu chigadzirwa chimwe chete T-Surkit-A inogona kukwana ne pro3, asi isina HDMI port.Kana iwe uchida HDMI chiteshi, chimwe chechigadzirwa chedu hachichina stock izvozvi.
Mubvunzo:Izvi zvinoshanda kune iyo Surface Laptop 1 here?
Mhinduro:Haisi kushanda kune yepamusoro laptop 1.
Mubvunzo:Ko hdmi ressolution yabuda sei?uhd kana fhd?
Mhinduro:UHD 4K/2K@30Hz kubuda.
Mubvunzo:Zvakadini nekubatanidza wireless mouse neimwe yeusb port?
Mhinduro:Yakanyatsobatanidzwa.Ndine yakafanana, batanidza zvakanaka.
Mubvunzo:Inoshanda kune yepamusoro laptop 2?
A:Heino maonero angu echigadzirwa ichi:
-Mutengo unonzwisisika kwazvo
-Izvi zvinobatana zvakakwana kune yangu Surface Pro
-Iyo ine yakanaka maficha, anosanganisira SD kadhi muverengi uye mamwe USB madoko
-Good yekunze monitor yekubatanidza
-Ini handina kana nyaya, zvisinei, hazvingatore simba rakawanda kubvuta uye kutyora chinongedzo ichi uchinge wakabatana mukombuta.Kana ukakuvadza, iyo USB kana Mini-Display Port yekubatanidza inogona kunge yakaipa.
Ichi chigadzirwa chikuru.Ini ndingati chenjera kuti usakadze chinongedzo, icho chakabatana nekombuta.
B:Chikonzero chikuru chandatenga ichi chiverengero chemakadhi ndeyetambo refu.Vamwe vese vanoverenga makadhi ndevemalaptops saka tambo dzavo ipfupi kuti dzigare padivi pelaptop.Iyo tambo refu inondibvumira kuiisa kuseri kwedesktop yangu ndoisiya ipapo.Usave nayo yakarembera kubva kumberi kwePC yangu uko inogona kubhurwa nekukuvadzwa.Ini ndinoshandisa desktop PC nekuti ini ndoda kuita rimwe basa riitwe.Ini ndinoda vhidhiyo kadhi chaiyo uye kwete mini vhezheni senge ndinopinda mulaptop.
Zvakapfuura: 6 mu1 USB3.0 mini DP kuenda kuHDMI USB3.0 RJ45 SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 5
Zvinotevera: 7in 1 USB3.0 Rudzi-C3.0 kuHDMI USB3.0 Rudzi-C SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 7